Kungani Singasayenzi Imisebenzi Yezinsiza Zokukhishwa Kwabezindaba | Martech Zone
Elinye lamakhasimende ethu lisimangazile namuhla, basazisa ukuthi babhalisele i- I-Press Release Distribution insizakalo enconywe ngomunye wabalingani babo lapho bengasabalalisa khona ukukhishwa kwabo emaphephandabeni kumasayithi ahlukene angaphezu kwama-500. Ngabubula ngokushesha ... nakhu ukuthi kungani:
Izinsizakalo Zokusabalalisa Zezindaba musa ukukala okuqukethwe okukhangisa nhlobo, ngakho-ke ngaphandle kokuthi umuntu alalele ngenkuthalo ukukhishwa okuthile kwabezindaba, imvamisa abakatholakali emiphumeleni yosesho.
Izinsizakalo Zokusabalalisa Abezindaba zigcwele ezesabekayo, asihlobene izinkampani. Isixhumanisi esivelayo ngokuvamile sidinga ukungavunyelwe kubaphathi beWebhu ukunciphisa ubungozi bokulimaza imiphumela yenjini yakho yokusesha.
Izinsizakalo Zokusabalalisa Zezindaba ziyi ayisebenzi. Lapho sigcina ukuwasebenzisa asizukubona nhlobo ithrafikhi futhi akukho mthelela kuzivakashi, kusesho, noma kunoma iyiphi enye inzuzo.
Uma kuzwakala kulula kakhulu, kungenxa yokuthi kunjalo. Futhi akukhona nje ukuthi kulula kakhulu, ukuchitha izinkulungwane zemali namuhla kungakudalela izinkulungwane zamaRandi ngesikhathi osichithe kamuva ukucwaninga nokuhlukanisa izixhumanisi.
Iphromoshini Yokukhishwa Kwabezindaba Ngokusatshalaliswa
Uma ufuna ngempela ukufika phambi kwezethameli ezifanele kumasayithi afanele, inqubo enhle kakhulu kuwe ukwakha uhlu lwamasayithi okubhekiswe kuwo lapho okuqukethwe kwakho kubaluleke kakhulu futhi amasayithi anegunya ku-inthanethi. Indlela enhle yokuhlola ukufaneleka ngokusebenzisa amazinga asezingeni langempela lokusesha usebenzisa ithuluzi elifana neli Semrush noma ukuthandwa ngesayithi elifana ne- Buzzsumo.
Uma ukwazi ukubona amasayithi angama-25 kuye kwangama-50 anamandla futhi adumile esihlokweni, manje usungakwazi ukumba futhi ubone ukuthi ungaxhumana kanjani nomnikazi wesayithi. Amapulatifomu afana mi nikela inkampani enezindlela zokukhomba nokuthumela abagqugquzeli abavela kulawo masayithi. Amasistimu abo ahlinzeka nezinketho zokwenza izicelo eziphindaphindwayo, ukubika ngomthelela wokufinyelela kwakho kubudlelwano bomphakathi, futhi kuvumele nempendulo noma ukuphuma kumlobi wentatheli noma umthelela onamandla.
Chitha isikhathi esithile ukhiqiza iphimbo elihle. Funda okuthunyelwe okumbalwa okusuka kusayithi lomgqugquzeli ukuze uzizwe ukuthi hlobo luni lokubhala abakwenzayo nokuthi yiluphi ulwazi abangaludinga. Bese ubenzela umyalezo ubatshela ngezindaba zakho, ukuthi unganikezwa yiphi indawo kusayithi, bese unikela nganoma yiziphi ezinye izimpahla ezifana nezithombe noma amavidiyo ukuze lowo oshukumisayo akwazi ukuhlanganisa i-athikili kalula.
Ngaleli klayenti, besinabo embukisweni owodwa obalulekile wethelevishini esifundeni, besike sashiwo emthonjeni ngamunye wezindaba zebhizinisi lesifunda, futhi sike sakhulunywa kaningana kukho konke ukushicilelwa okubalulekile embonini. Umthelela jikelele ubumangalisa futhi isayithi liyaqhubeka nokubeka kahle amagama angukhiye afanele.
Kodwa-ke, njengoba kunikezwe lokhu kusatshalaliswa, manje sekufanele siqaphele isiza sama-backlinks amabi ngoba asifuni ukuthi amazinga abo okusesha we-organic ahlupheke uma i-Google ikholelwa ukuthi baphumele ogaxekile amasayithi wokusabalalisa ama-PR kuma-backlinks. Ngakho-ke, akusetshenziswanga kuphela ekusetshenzisweni, kusibangela usizi olwengeziwe njengoba siqapha amazinga esiza kanye negunya le-organic search engine.
Tags: ama-backlinksbuzzsumoukusikaprukusatshalaliswa kwe-prisitatimende sephephandabaukusatshalaliswa kokukhishwa kwabezindabasemrush
Hluma Komphakathi: Dala, ubuke kuqala, futhi uphathe ama-Bots Chat Chat